ဖွတ်ကြားစိတ်ဓာတ်တိုက်ဖျက်ရေး အရေးတော်ပုံ – Min Thayt
Audio Books Book Review Literature Politics
စာညွှန်း / သခင်တွေရဲ့နိုင်ငံ (ဆောင်းပါးများပေါင်းချုပ်)
ဒီစာအုပ်က စာရေးသူ တင်မောင်သန်း မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့တုန်းက ရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၅ ကနေ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရေးခဲ့တဲ့ စာတမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ “သခင်နိုင်ငံတော်” အမည်နဲ့ ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ စာအုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က စာပေစိစစ်ရေး အင်မတန် တင်းကျပ်နေချိန်။ စာပေကင်ပေတိုင်လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးသားဖြန့်ချိခွင့်ကို အလွန်အမင်း ပိတ်ပင် တားဆီးထားချိန်။ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကို နှုတ်က ပြောဖို့တောင် မဝံ့မရဲဖြစ်နေချိန်။ အာဏာရှင်စစ်မင်းတို့ တန်ခိုးထွားချိန်။
အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ စာတမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အခု “သခင်တွေရဲ့ နိုင်ငံ” နာမည်နဲ့ စာအုပ် ထုတ်လိုက်တယ်။ စိတ်ကူးချိုချိုက ထုတ်တယ်။ စာအုပ်မှာ တင်မိုးရဲ့ အမှာစာပါတယ်။ မောင်သစ်ဆင်းရဲ့ အမှာ စာပါတယ်။
စာအုပ်မှာပါတဲ့ စာတမ်းတွေထဲမှာ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ စာတမ်းတွေပါတယ်။ ဖြတ်တောက်ခံရစဉ်က ပါမလာတဲ့ စာပိုဒ်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှားစာလုံးမည်းနဲ့ အပြည့်အစုံဖော်ပြထားတယ်လို့ စာရေးသူရဲ့ အမှာစာ မှာ ပြောထားတယ်။ ဆင်ဆာဖြတ်ခံရတဲ့ စာတမ်းတွေကို အပြည့်အစုံ ပြန်လည်ဖော်ပြထားသလို၊ လုံးဝဖော်ပြ ခွင့် မရခဲ့တဲ့စာတမ်းတွေကိုလည်း စုစည်းပုံနှိပ်ထားတယ်။
အာဏာရှင်စစ်မင်းတို့က မြန်မာပြည်ကို ကျွန်ဇာတ်သွင်းနေချိန် သခင်စိတ်၊ သခင်အကျင့်အတွက် ဆော်ဩတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ တပ်လှန့်စာတမ်းတွေလို့ မြင်ပါတယ်။ စစ်မင်းတို့ ဘာ့ကြောင့် ကြောက်သလဲ၊ ဘာ့ကြောင့် ဆင်ဆာပိတ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့ ဒီစာအုပ်ဖတ်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဆင်ဆာဖြတ်ခံရတဲ့စာတမ်းတွေနဲ့ ပိတ်ပင်ခံရတဲ့စာတမ်းတွေကို စာရေးသူရဲ့ ရည်ညွှန်းချက်မှာ ပြောပြထား တယ်။
• “သခင်စိတ်ဓာတ် သခင်အကျင့်” စာတမ်း
• “ကျွန်ပညာရေးနှင့် သခင်ပညာရေး” စာတမ်း
• “ကုသိနာရုံမှ သီဟိုဠ်၊ သီဟိုဠ်မှ မြန်မာသို့” စာတမ်း
• “ကျွန်ုပ်တို့ အယ်ဒီတာ ကျွန်ုပ်တို့ မဂ္ဂဇင်း ၊ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်” စာတမ်း
• “ဆယ်နှစ်သားကလေးနှင့် ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အကြောင်း” စာတမ်း
စာအုပ်က စာမျက်နှာ ၂၅၀ နီးပါး ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ပထမဆုံး စုစည်းပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တင်မိုးက စာအုပ်ရဲ့ အမှာကို “သခင်ကျင့်ကို ကျင့်ကြပါ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရေးတယ်။ အမှာစာမှာ အခုလို ညွှန်းတယ်။ “ဆရာ တင်မောင်သန်းရဲ့ သခင်စိတ်ဓာတ် သခင်အကျင့် ကျွန်ပညာရေး သခင်ပညာရေး” စာအုပ်ာ သခင်စိတ်ဓာတ်ကို အုတ်မြစ်ချပေးမယ့် စာအုပ်။ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း သခင်သွေးတွေ ဖြန်းဖြန်းထစေမယ့် စာအုပ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အလွန်ထူးခြားပြီး အလွန်လိုအပ်နေတဲ့ စာအုပ်။ ဒီလို ကျွန်တော် ထင်မြင်တယ်။ အဲဒီလို ရဲရဲယုံကြည်တယ်…” လို့ ရေးထားတယ်။
မောင်သစ်ဆင်းက စာအုပ်ရဲ့ အမှာကို “ဖွတ်ကျားစိတ်ဓာတ်မှသည် သခင်နိုင်ငံတော်သို့” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရေးတယ်။ ဒီအထဲမှာ မောင်သစ်ဆင်းက “ဖွတ်ကျားစိတ်ဓာတ်ဖြင့်တော့ လူတစ်ယောက်၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ပေမီဒေါက်မီ ဖြစ်အောင် ပုံဖော်နိုင်မည် မဟုတ်…” လို့ ရေးထားတယ်။ (ဆရာ) တင်မောင်သန်း ထု လိုက်သော မောင်းလို့ ပမာပြုတယ်။ ဆရာ တင်မောင်သန်း နှစ်၍၊ မြုပ်၍ လုပ်တော့မယ့် မစ်ရှင်လို့လည်း သမုတ်လိုက်တယ်။
စာအုပ်ထဲက စာတွေက သင့်ဘဝ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြပြီးသား ဆောင်းပါးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးတွေ ဆိုပေ မယ့်၊ ဆောင်းပါး အဆင့် မကပါ။ စာတမ်းသဘောမျိုးဆောင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးကား ချက်တွေပါတယ်။ ရည်ညွှန်းချက်တွေပါတယ်။ စာညွှန်း၊ စာကိုးတွေပါတယ်။ ဆရာတင်မောင်သန်းက၊ အခုဆိုရင် အကယ်ဒမစ်နယ်ဘက်မှာ ကူးလူးကျင်လည်နေပြီ။ စာရေးဆရာ ပေါက်စ ဘဝကတည်းက၊ စာကို ပညာရပ်ဆိုင် ရာ စာတမ်းတစ်ခုလို ရေးခဲ့တဲ့ ပုံစံကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆောင်းပါးတွေ ရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ ခုနှစ်တွေကို သတိထား ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ၁၉၉၄ – ၉၅ – ၉၉ တို့မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီ့ခေတ်ကာလကို မှန်းဆကြည့်မိတယ်။ ၈၈ အရေးအခင်းအပြီး၊ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုး ဒဏ်တွေကို အလူးအလိမ့်ခံနေရချိန်၊ နဝတ ခေတ်။ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကို အပြတ်အသတ် ချေမှုန်းရေး လုပ်နေတဲ့အချိန်။ စစ် ဘောင် အကျယ်ဆုံး အခြေအနေ။ အရပ်ဘက်မှာ စစ်စရိုက်တွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်၊ လူတော်တော်များများက ကြောက် အားကြီးနေတဲ့အချိန်၊ ဖိနှိပ်ရေးယန္တရားကို စစ်အစိုးရက အစွမ်းကုန် ထုတ်သုံးနေတဲ့အချိန်။
သည်လိုအချိန်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လူထုအကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အမှီးကျက်အမှီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား တွေ ထောင်းတမောင်းထနေမယ် ထင်တယ်။ လူတွေက ကိုယ့်ဖို့ကိုယ်သာ ကြည့်ပြီး၊ ကိုယ့်ကိစ္စကိုပဲ စိတ်ဝင် စားနေကြတော့မယ်။ တော်တော်များများရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာ ပျက်သင့်သလောက် ပျက်ပြီးနေပြီ။ စိတ်ဓာတ် ရေးရာမှာ ငါရှာမှ ငါစားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေ အားကြီးနေပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဆရာတင်မောင်သန်း (သင့်ဘဝ) ဆောင်းပါးတွေက၊ သခင်စိတ်ကို နိုးပေးလိုက်တယ်။ အိပ်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို သူနိုင်သလောက် လက်ပုတ်နိုးလိုက်တယ်။ သခင်စိတ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ပြန်ဖော်ပေးလိုက်တယ်။ သခင်စိတ်ဆိုတာ လူ့ဥပဓိမှာ အမြင့်စား၊ အလန်းစား အဆင့်ကို ရောက်နေတဲ့ အနေအထားကို ဆိုလိုတာပါ။ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်ရမလဲလို့ နည်းလမ်းပြတယ်။ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ပိတ်ပင်ခံနေရတဲ့ အဲသည့်ကာလမှာ စတီဗင်အာကိုဗေးရဲ့ စာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ အနောက်တိုင်း လစ်ဘရယ်စဉ်းစားနည်းတွေကို ရေးပြလိုက်တယ်။ မြန်မာ့စာပေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မြုပ်ဝင်နေတဲ့အရာတွေကို ဖော်ပေးလိုက်တယ်။ ပညာကို ဦးစားပေးတယ်။ အလုပ်ကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ပြတယ်။
နေ့စဉ် အလုပ်တွေမှာ အရည်အသွေး ရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲပုံကို ဖတ်ရတယ်။ အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါလေးကွက်ကြားလို့ လူသိများတဲ့ ၊ အရေးကြီး အရေးမကြီး၊ အရေးပေါ် အရေးပေါ် မဟုတ်… ဆိုတဲ့ အစီအမံကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အချိန်ကို လေးစားတတ်ခြင်း၊ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ခြင်းဆိုတဲ့ လူကြီးလူကောင်း အပြုအမူတွေကို ရေးပြထားတယ်။ ေဩာ်… အဲသည့်တုန်းက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထပ် ဖြစ်နေတာကို၊ စာဖတ်ပြည်သူကို စာရေး ဆရာ လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေ တာဝန်ကျေခဲ့ပါ့လားလို့ အောင့်မေ့မိတယ်။
အလုပ်၊ အချိန်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုတာတွေ တွေ့လိုက်တယ်။ ဒီလို အကျင့်အကြံတွေဟာ သခင်စိတ်ဓာတ်၊ သခင်အပြုအမူ ဖြစ်ကြောင်း ကျနော် နားလည်လိုက်ရတယ်။
မြန်မာ့စရိုက်၊ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း ဆန်းစစ်ပြတယ်။ ဥပမာ – အလှူဒါန ပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေ။ အနောက်တိုင်းမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ စားသုံးသူ ယဉ်ကျေးမှုလည်း ဖတ်ရမယ်။ ဝယ်သူကို ဘုရားသခင်လို သဘောထားပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အချိန်၊ မြန်မာပြည်မှာကတော့ ဘတ်(စ)ကား ပေါ်မှာ ဆဲဆို၊ အော်ဟစ်၊ တွန်းထိုးနေလို့ ကောင်းတုန်း ရှိပါသေးတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူ့အဆင့်အတန်းကို ကြည့်ကြပါစို့။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘယ်ကို ရောက်နေပါ သလဲ။ ဘယ်အဆင့်၊ ဘယ်အလွှာကို ရောက်နေပါသလဲ။ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ မလုံလောက်၊ မပြည့်စုံတဲ့ အချိန်၊ ဖိနှိပ်တားဆီးမှုတွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နေတဲ့အချိန်၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာတို့ ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့အချိန်…. အချိန်၊ အချိန်၊ အချိန်။
ကျနော်တို့ဟာ လူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့ အပြုအမူ ဆိုတာကို သေချာ ဂရုထားပြီး ကြည့်ဖို့ လိုနေပါလား ဆိုတာ ကို သိလိုက်ရတယ်။
• လူကြီးလူကောင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
• သခင်ကျင့် ၊ သခင်ကြံ ဆိုတာ ဘာလဲ။
• ကျွန်စိတ် ကျွန်အပြုအမူဆိုတာ ဘာလဲ။
သခင်တွေရဲ့ နိုင်ငံစာအုပ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ထုတ်ဝေခွင့် မရခဲ့ဖူးလို့ သိရပါတယ်။ အခုမှ ထုတ်ဝေခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်အခုလို အခြေအနေရောက်နေတာဟာ သိပ်အံ့ဩစရာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆရာတင်မောင်သန်း ထုလိုက်သော မောင်းသံသည် ဘယ်၍ ဘယ်မျှ မည်ဟီးနေပါသလဲ။ အာဏာရှင်စစ် မင်းတို့ကို တုန်လှုပ်စေသော မောင်းသံဖြစ်ခဲ့သလား…။ မောင်သစ်ဆင်းက သခင်နိုင်ငံတော်စာအုပ်ဟာ ဖွတ်ကျား စိတ်ဓာတ် တိုက်ဖျက်ရေး အရေးတော်ပုံလို့လည်း ပြောလိုက်တယ်။ သခင်နိုင်ငံတော် ထူထောင်ရေး မှာ ဘယ်သူတွေ ပါမှာလဲ။ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပါဝင်ကြရင်ဖြင့် ဖွတ်ကျားအဆင့်မှ လွတ်မြောက်အံ့ဟူသော သဘော ကို ရေးပြီး မှာတယ်။
ဒီတော့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ၊ စာသမား၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ မျိုးချစ်ပြည်သူများကို မဖြစ်မနေ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
ည ၈း၁၅
၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၈
Tagged Myanmar Audio Book, Myanmar Book Review, Tin Maung Than
Previous post အချစ်ဟာ တိမ်တွေကြားမှာလား….
Next post အဝေးကြည့်